Thursday November 07, 2019 - 17:39:45 in Articles by Hadhwanaag News
Haddalada Madaxwaynaha la doortay ee Tuunis sidaan hore usoo sheegnay
wuxuu ku tiraabay in dadka reer tuunis ay ka baxsadeen Qafaskii ay ku jireen, mar dambana ku noqon doonin. Taasi oo loo fahmay in dadku ka ilbaxeen harawsiga siyaasiyiinta guunka ah, ee dadka kala qo’qobay taasi oo dadka reer tuunisna rumeeyeen riyadiisii kursigiina gurada uga baxay.
Mar uu ka hadlay Qays waxa uu yidhi "Qaddiyada Xeerka Qoyska waxaan ka qaatay mawqif cad marka koobaad masaladan dhinaca dhaxalka waxay ku caddahay kuna xardhantahay dhigaal Qur’aan ah, Mana furna meel lagu macno guuriyo dhigaal Quraan.”
Waxa kale oo uu xusay in 1981 mawqif uu qaatay madaxwaynihii hore ee dalkaasi Xabiib Burqiiba ka dib markii dad ku baaqeen in dhaxalka wax laga badalo oo raga iyo dumarka ah, haddal kaasi hore oo ahaa "Dhigaalka Quraanku waa waadix mana aqbalaayo macno guurin umana yaalo” waa markay ka hadleen guurka afarta dumarka ee diintu banaysay.
Waxa kale oo uu ka hadlay Qays Saciid in 2000 kii markii taariikhdu ahayd waxa jira qaraar baarlamaanka midawga yurub qaatay oo ahaa in xidhmooyin dib u habayna lagu sameeyo tuunis, kuwaasi oo qaar taabanayeen dhinaca dhaxalka waxaanu yidhi "Ma nihin baadi ama bustaan, balse waxaanu nahay dawlad iyo Qaran jira oo karaamo iyo oo leh doorashadiisa gaarka ah iyo shacbi karaamo iyo siyaado doorasho leh.”
Mawduucan wuu ku dheeraaday maadaama kooxo wataa hadda kuna celiyay "Suurto galmaaha in arrimahooda gaarka ah ee shakhsiyadeed lasoo galo, waayo waa arrimahayaga maxaa ka khuseeya cid ajaaniba doorashadayaa arrimahaasina waxaa go’aamiyay dhigaal qur’aana iyo aayad waadixa oo aan xambaari Karin macno kale ka doonaya in uu caruurtiisa ka simo dhaxalka ha kasimo isagoo nool.”
Halka ay ka tahay gabadh sharciga taqaana oo lataliye sare oo maxkamadeeda, waana gabadhii u horaysay ee sharci yaqaana ee qasriga Qardaash gasha, haddana xukunka ka fog sida la filaayo saansaanta ilaa hadda. Taa waxa ka sii cajiibsan in magaca ma naanaysta caanka noqotay ee Marwada koobaad meesha laga saaray siduu ku balan qaaday ol’olihiisa kana dhabeeyay.
Waxa kaloo uu sheegay "in arrinku uu ka sareeyo kana gun dheer yahay in la doorto qof oo war qad lagu rido sanduuq balse dadkaygow waxaan u baahanahay in dib loo soo celiyo lana dhiso aaa’aas cusub, iyo calaaqaad kalsooni ku dhisan oo cusub una dhaxaysa madaxda iyo dadka, waana in dawladu soo celiso doorkeedii bulsho, karaamada waddankuna waa karaamada muwaadiniinta.”
Halka uu ugu baaqay cid kasataa oo xadkasta uga gudubtay nolol, abaalooduna noqday in dhimasho la jaaraan, aan ku dhaqaaqno barakada Rabbi (swt) isagaan kaligii caabudnaa isagaan uunbaan kaalmo ka sugnaa”’ aan dhaqaaqno doonis badhax la’ iyo abuurida taariikh cusub oo ku taagan, halku dhig’gaan doortay "Idinka, Shacbigaa doonaya”
Qalinkii Axmad Cali Kaahin